हरेक विधामा अव्बल विष्णुबहादुर तामाङ – काभ्रे प्रवाह
हरेक विधामा अव्बल विष्णुबहादुर तामाङ
१६ बैशाख २०७८, बिहीबार १८:२२ sharan
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको साविक ढुंखर्क गाउँ विकास समिति–६, हाल वेथानचोक गाउँपालिका–२ मा बुवा ठिलबहादुर तामाङ र आमा बुद्धिमाया तामाङको कोखबाट एउटा मध्यम परिवारमा २०४१ सालमा जन्मिएका विष्णुबहादुर तामाङ पछिल्लो समयमा अव्बल गायक, संगितकार अनि संगित संयोजकको परिचय बनाउन सफल भएका छन् । बाल्यकालको अधिकांश वर्षहरु गाउँमा बिताएका उनले श्री पार्वती माध्यमिक विद्यालयमा स्कुले जीवन पार गरी धेरै सपना सजाएर राजधानी झरेका विष्णुबहादुर तामाङले त्यसपछिका दिनहरुमा उच्च शिक्षा लिदैं गायनमा पनि समय खर्चिन थालेका थिए । विशेष गरी संगीत संयोजनमा तीब्र अभिरुचि भएका तामाङ बिगत १८ वर्षदेखि यो क्षेत्रमा संघर्ष गर्दैछन् । सानै उमेरदेखि विभिन्न म्यूजिकल प्रोग्राममा सहभागी बन्दै आफूमा पनि कला भएको आभाष दिलाउँदै आएका विष्णु पछिल्लो समय अझै निखारिएका छन् । मिलनसार र नम्र स्वभावका धनी अनि आवाजमा रस भरिएका उनी आफ्नो जीवनको यात्रामा कम उमेरमै सफलता हात पार्न सफल भएका छन् । ‘सुन्दर सपना’ सुगम संगितबाट साङ्गीतिक यात्रामा गायकको रुपमा डेव्यू गरेका उनी संगीत प्रेमी श्रोता दर्शकको प्रंशसाको पात्र बन्न पुगेका छन् । एक दर्जन भन्दा बढी गीतमा आवाज भरिसकेका विष्णुबहादुर तामाङले हालसम्म ५ सय भन्दा बढी गीतमा संगित भरिसकेका छन् भने ३ हजार भन्दा बढी गीतको संगित संयोजन गरिसकेका छन् ।
आफूले संगित संयोजन गरेको गीत सालको पात हे मायाले अपार सफलता पाएपछि आफ्नो मेहनत सार्थक बनेको उनले महशुस गरे । आफूले गाएका दर्जन भन्दा बढी गीत मध्ये एक्लो जीवन–२ ले आफूलाई पनि सन्तुष्टी मिलेको उनले सुनाए । उनी भन्छन् ‘ मेरो जीवनमा सङगीत नै मुख्य कुरा भएको छ । घरबाट ठुलो सपना लिएर काठमाडौं आएको थिए र अहिले मेरो सपना साकार भएको जस्तो लाग्छ, उनी भन्छन् ।’ संगीतलाई कसरी लिनु भएको छ ? भनेर राखिएको जिज्ञासाको जवाफ दिदै उनी भन्छन्– ‘सङ्गीत क्षेत्रमा सफलता पाउन निकै मेनहत तथा संघर्ष गर्नुपर्ने रहेछ । चाहे आफ्नो सुख, चाहे आफ्नो दुःख, अनि कतै देखिएका, कतै भोगिएका कुराहरु संगित साधनामा व्यक्त गर्नु संगित हो जुन सुनेपछि वा व्यक्त गरेपछि सुखानुभूति हुन्छ । दुःख पर्नेले केही दुःख हल्का महशुस गर्छ । खुसीमा रहनेले अझै आनन्दको महशुस गर्छ । यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने रहर गरेर मात्रै पुग्दैन, आर्थिक, कला र दृढ विश्वास पनि हुनु पर्ने उनको बुझाई छ ।
उनको परिचय गायक, संगितकार र संगित संयोजकले मात्र पुग्दैन । उनी कुशल बाद्यवाधक पनि हुन् । प्रयोगमा आएपनि नआएपनि ज्ञान लिनु नराम्रो होइन भन्ने धारण राख्ने उनले विभिन्न संगित पाठशालामा विभिन्न बाजाहरुको पनि ज्ञान लिएका छन् । गुरु जगन्नाथ धगौडासँग तबला बजाउन सिकेका उनले विष्णु अधिकारीसँग किवोर्डको ज्ञान लिएका थिए । आर. आर. क्याम्पसमा संगित विषय लिएर पढेकै भरमा मात्र आज उनी यो स्थानसम्म पुगेका हैनन् । उनले साधना कला केन्द्र, सुनकोशी संगीत विद्यालय लगायतमा गुरुहरु राम भण्डारी, प्रकाश गुरुङ, रामचन्द्र अञ्जान, धनबहादुर गोपालीसँग गायन पनि सिके । सुगम संगित होस या लोक दोहोरी, चाहे पप गित नै किन नहोस उनी उत्तिकै न्याय दिएर गाउन, बजाउन र संयोजन गर्न सक्छन् । सांगितिक क्षेत्रमा बनेको यो उचाई उनकै मेहनत र संघर्षमा नहारेकै उपज हो । यो क्षेत्रमा पाएको सफलता निरन्तरताको लागि गायक, संगितकार अनि संगित संयोजक विष्णुबहादुर तामाङलाई काभ्रे प्रवाहको पनि शुभकामना ।
Previous कोरोनाको हटस्पट बन्दै संघीय राजधानी
Next भरिए राजधानीका कोभिड अस्पताल